Kuwa kweVenezuela ndiyo yakaipisisa makumi emakore kunze kwehondo, maererano ne economists - New York Times - TELES RELAY
HOME » mwe Kuwa kweVenezuela ndiyo yakaipisisa makumi emakore kunze kwehondo, maererano neve economists - New York Times
Kuwa kweVenezuela ndiyo yakaipisisa makumi emakore kunze kwehondo, maererano neve economists - New York Times
MARACAIBO, Venezuela - Kuparara kweZimbabwe pasi peRobert Mugabe. Kuwa kweSoviet Union. Njodzi inotyisa yeCuba mumakore e90.
Kuwa kwehupfumi hweVenezuelan kwakavhiringidza vose.
Kuwa kweVenezuela ndiko kuparara kukuru kwezvemari kunze kwehondo yekusvitsa makore 45, maererano neve economists.
Zvakaoma kufunga nezvedambudziko remunhu uyu kunze kwehondo yehurumende, "akadaro Kenneth Rogoff, purofesa wezvoupfumi kuHarvard University uye aichimbova mukuru wezvemari we International Monetary Fund. "Ichava chigunzva chematambudziko ane njodzi kwemakumi emakore anouya."
Kuwana maitiro akafanana ehupfumi, MFI economists Akaratidza kunyika dzakaparadzwa, dzakadai seLibhiya pakutanga kweiyi makore kana Rebhanoni mumakore e70.
Asi Venezuela, nyika yakafuma kwazvo muLatin America, haina kuparadzwa nehondo. Maererano ne economists, the hurumende ine hurombo, uori uye mazano asina kuchenjera Mutungamiri Nicolás Maduro uye mutungamiri wake Hugo Chávez vakashandura kutengesa kwepfuma, kupfigira mabhizinesi uye kuisa nyika pamabvi avo. Uye mumwedzi ichangopfuura, hurumende yeTrump yakapa chirango chisina kuedza kuedza kuchikuvadzazve.
Sezvo hupfumi hwenyika hwakaputsika, zvikwata zvehondo zvakagadzirisa maguta ose, mabasa ehurumende akadonha uye simba rekutenga reVenezuelan vakawanda rakawedzera kuduku. makirogiramu mashoma eupfu pamwedzi
Mumisika, mabheki anokonzerwa nekugara kwechigadziro chinokambaira kutengesa sora pakuvira kwezuva. Vashandi vekare vakatsvaga mapeji emarara kumapuranga uye mapurasitiki akadzoka zvakare. Vaya vanoodza mwoyo vanotengesa vanoita maitiro akawanda kuenda kubhangi vachitarisira kuisa mabhizinesi emabhiriyoni akawanda akashongedzwa ne hyperinflation.
Pano muMaracaibo, guta revanhu vane mamiriyoni maviri pamuganhu neColombia, vanenge vari vatengesi vari munyika. Misika yacho yakamira kutengesa kutengesa nyama mukuda kwezvokudya uye zvakasara zvakadai semafuta uye mafuta, mapuroteni chete emhuka akawanda ayo vatengi vavo vanogona kugona.
Dambudziko racho rakanyanyiswa nezvikwereti zveUnited States zvakagadzirirwa kumanikidzira Maduro kuti ape simba kumutungamiri wepikisano yenyika, Juan Guaidó. Zvisungo zvekare yeTrump inotungamirirwa nekambani yemafuta yenyika Venezuela yakadzivisa hurumende kutadza kutengesa zvinhu zvayo, mafuta. Mukuwedzera pakurambidzwa kwakaitwa neUnited States kuVenezuelan kushambadzira kushambadzira, hurumende yakaita kuti zvive zvakaoma kuVenezuela kutengesa zvinhu, kusanganisira zvokudya nemishonga.
Maduro zvikwereti zvakapararira kusasha kwezvokurapa et
Caprese Chicken Recipe - NYT Kubika - New York Times
Cameroon: Mamadou Mota kuna Pr Fame Ndongo "rega kuzvienzanisa muKamto, haana kana akaenzana muhurumende yeByya"